That's so good, right?: January 2015
Posted by Alex Aung at 6:58 PM No comments:
ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ အလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုသာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ် အမြဲလိုလို ဂုဏ်ယူပြီး နေထိုင်ခဲ့တာပါ။ အရပ်အမြင့်က ၆ပေ ၊ ညှို့မျက်ဝန်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့ မျက်ဝန်းအစုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီ6းpacks ပေါ်နေတဲ့ abs ပိုင်ရှင်၊ သွယ်လျကျစ်လစ်သော ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် နုညံ့စိုပြေသော အသားအရေ၀င်းဝင်းဝါ၀ါကို လက်ဆောင်ရထားတာဗျ။ ကျွန်တော်နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်သက်ဖို့ သဘောတူတဲ့ ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံးနဲ့ ကျွန်တော် ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံမှုအများစုမှာ ပြဿနာလုံးဝ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခါးက ဘောင်းဘီလေးကို အသာလျောချပြီး ၇လက်မကျော်ရှည်ကာ တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ရှိလှတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကိုဖွင့်ဟပြ လိုက်ရင်ပဲ သူတို့မျက်ဝန်းတွေဟာ အရောင်တလက်လက်တောက်ပကာ သူတို့ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ဖို့သဘောတူကြတာ ကြီးပါ။ အားရစရာကြီး….အားရစရာကြီးလို့ သူတို့ဆိုကြပေမယ့် သူတို့အတွက် အခက်တွေ့နေကြတာကများပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ လည်မျိုထဲရောက်သည်အထိ အထုတ်အသွင်း မလုပ်နိုင်ကြဘူးလေ။
တစ်ညသား ကျွန်တော်နှင့် မကြာခဏ ချိန်းဆိုတွေ့ဆုံလေ့ရှိတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ကြမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်အခန်းမှာ ခဏထိုင်ဖြစ်ကြပါတယ် ဘာမှမလုပ်ခင်။ သူမက ပြောတယ် ကျွန်တော့်ငပဲကြီးတစ်ခုလုံးကို သူမ ပါးစပ်ထဲ သို့မဟုတ် pussy ထဲကို အကုန်ထည့်ဖို့ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ နည်းနည်းအခက်တွေ့တယ်ဆိုပဲ။ သူမကို တောင်းပန်စကားဆိုရပေမယ့် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်က သာမန် လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သူမက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအင်ကိုအကုန်ဖြည့်စွမ်းချင်တယ် ပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ငနဲ တစ်ပွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်သင့်တယ်တဲ့။ သူမမှာ လိင်တူခြင်းသဘောကျတဲ့ ဂေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ အဲ့ဒီငနဲဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အဆင်ပြေလောက်တယ် သူကလည်းတွေ့ချင်မှာပါလို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဟင့်အင်လို့ငြင်းလိုက်တာပေါ့။ ငနဲတွေဆိုတာ ကျွန်တော့်အကြိုက်မှ မဟုတ်တာ။
ထားပါလေ အဲလိုပဲပြောလိုက်မိတာက ကျွန်တော့်ဦးနှောက်ထဲဝယ် အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆိုတာ တွေးမှမတွေးမိခဲ့တာ ကိုး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော့်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအပြည့်အ၀ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ပါ့မလား? အဲ့ဒီငနဲက ကျွန်တော့်ငပဲတစ် ချောင်းလုံးကို သူ့လည်မျိုထဲတိုင် အထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလား? သူ့ဖင်ထဲကိုတော့ အဆုံးထိထည့်ချင်ထည့်နိုင်လိမ့်မပေါ့။ ကျွန်တော့် လိင်အင်္ဂါဆိုဒ်က ပုံမှန်လောက်ပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးမိရပြီး စနိုးစနှောင့်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပဲ။
ကျွန်တော် ဆန်ဖရန်စစ္စကို ကို စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်။ Castro လမ်းနှင့် နှစ်ဘလောက်လောက်ဝေးတဲ့ ဈေးလမ်းပေါ်က မိုတယ် တစ်ခုမှာတည်းခိုခဲ့တာပေါ့။ ကျွန်တော်ကြားဖူးပါတယ် Castro မှာ ဂေးဘားတွေရှိပြီး အချို့ဘားတွေဆိုရင် တကယ့်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေရသတဲ့။ ဒီတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ဒီဧရိယာကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဘယ်လိုရှိလဲသိရအောင်ဆိုပြီး ညနေခင်း အလုပ်ပြီးချိန်မှာ ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် အဆိုပါ စီးပွားရေးဧရိယာငယ်လေးရှိရာကို လှမ်းသွားလိုက်တော့ ညနေစောင်းအချိန်လင့်သည်အထိ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဆိုင်ပေါင်းများစွာကို အ၀င်အထွက်လုပ်နေကြသော တစ်ယောက်လက်ကို တစ်ယောက်ကိုင်ကာ တွဲသွားတွဲလာလုပ်နေကြသော အမျိုးသားအတော်များများကို သတိပြုမိပါတယ်။ ဆိုင်တွေအတော်များများကလည်း အမျိုးသားဝတ်အတွင်းခံ၊အ၀တ်အစား ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုး၊ သားရေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ စသည်တို့ကို ရှုချင်စဖွယ် ခင်းကျင်းပြသထားကြပါရဲ့။ အပြင်အဆင် ခပ်မိုက်မိုက်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အတူ ဘားဆိုင်များစွာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘားဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီး ဘီယာ တစ်ခွက်လောက် မော့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရဲ့။ ဒီတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ လန်းတယ်ထင်တဲ့ ဘားထဲလျှောက်ဝင်သွားလိုက်တာ ရုတ်တရက် မျက်လုံးတွေဝိုင်းသွားလောက်အောင် အပြင်အဆင် အပြအသ လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေပုံတွေက ကြည့်လိုက်တဲ့ တီဗွီမော်နီတာ အချို့ကြောင့်ပါသလို၊ အမျိုးသားမော်ဒယ်လ်အချို့ရဲ့ အ၀တ်မဲ့နေမှုများကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ အချို့တွေဟာ သူတို့တင်သားတွေလို အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုဖွင့်ပြထားသလို အချို့တွေကလည်း မာတောင့်နေတဲ့ သူတို့ငပဲတွေကို ရှင်းကနဲဖော်ပြထားပြီး အားရပါးရကပွဲဆင် နေကြတာလေ။
ကျွန်တော် ဘားကောင်တာစီသွားပြီး ဘီယာတစ်ခွက်မှာလိုက်ပါတယ်။ Bartender က ငနဲနှစ်ပွေနဲ့ စကားလက်ဆုံကျနေတာများ ကျွန်တော့်ကို အာရုံပြုမိဖို့တော်တော်ကြိုးစားလိုက်ရပါသေးရဲ့။ ဘီယာတစ်ခွက်သောက်ရဖို့အရေးအတော်ခဲယဉ်းသား။ ကျွန်တော် ဘီယာကို မျှဉ်းစုပ်ရင်း ဟိုသည်ကြည့်မိတော့ နံရံကိုမှီရင်း ရပ်နေတဲ့ ဘဲတစ်ပွေကို သတိထားမိတယ် ပုံစံက အလန်းစား။ သူ ကျွန်တော့်နံဘေးနားကို ခပ်ဖြေးဖြေးလျှောက်လာပြီးနောက် အလွတ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ဘီယာဖန်ခွက်ကို ကျွန်တော့်ရှေ့နားချလိုက်ကာ “Howdy”တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်း “Howdy…အိုကေတယ် မဟုတ်လား’’ လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူက ဒီအရပ်ဒေသကပဲလားလို့မေးတော့ ကျွန်တော်က မဟုတ်ဘူး စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့လာတာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါရဲ့။ Levi’s Jean, အဖြူရောင် တီရှပ်၊ပြီးတော့ အဖြူရောင် sneakers တွေနဲ့ တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ငနဲပဲဗျ။ သူ့အရပ်အမြင့်ရယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ကိုယ်ဟန်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်အတိုင်း တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ပဲလေ။ ဒါဆို ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘယ်နေရာမှာတည်းလည်းလို့ သူကမေးတော့ ကျွန်တော်တည်းတဲ့ မိုတယ်လိပ်စာကိုပြောပြလိုက်တော့ Oakland ဘက်မှာသူနေထိုင်ပါသတဲ့။ မြို့ထဲကို တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက် ညဘက် ထွက်ဖြစ်တာဆိုပါလား။ သူက ကျွန်တော်တဲတဲ့ မိုတယ်ကအခန်းကိုသွားပြီး အနားယူကြရအောင်လို့ပြောပေမယ့် ကျွန်တော်က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော် ဂေးမဟုတ်ဘူးလို့။ ဒါဆိုသူက ဘာကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ဂေးဘားကိုရောက်နေရတာလဲလို့မေးရော။ ဒါ ဂေးဘားမှန်း ကျွန်တော်မသိဘူး ဘီယာတစ်ခွက်လောက်မော့ချင်လို့လျှောက်ဝင်လာမိတာလို့ပြောလိုက်တယ်။
အမှန်တကယ်တန်းတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေခွဲမရသေးတဲ့လူအမျိုးအစားထဲမှာ ကျွန်တော်ပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်သိတယ် ဒီလူပုံစံ မျိုးကိုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရဘူးဆိုတာ။ သူက အခြားဘားတစ်ခုခုကိုရွေ့ဦးမယ်လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ထထွက် သွားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်တော့ထရပ်လိုက်မိပြီး အဲ…သူက တော်တော့်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ငနဲပဲ….ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့် သူ့နောက်ကို ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ ဟန်ပြင်လိုက်မိပါလိမ့်။ ကျွန်တော် အတွေ့အကြုံသစ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်ချင်ရုံသက်သက်ပဲလား ကျွန်တော် ဒီ့ထက်ပိုပြီး ပွင့်လင်းသင့်သလား အင်း…..ရန်မူခံရမှာကို စိုးရိမ်မိနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သိပ်တော့မကြာပါဘူးလေ…နောက်ထပ် ခပ်မိုက်မိုက် ဘဲတစ်ပွေ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ဘားကောင်တာနား ဘီယာတစ်ပုလင်းဆွဲကိုင်ပြီး ရောက်လာတယ်။ သားရေဘောင်းဘီ သားရေ စွပ်ကျယ် သားရေ ဦးထုပ် သားရေ ဘွတ်ဖိနပ်နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးရှိသမျှ အလုံးအထည်လိုက် ပြနေတာလေ။ ကြည့်ရတာ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားပုံစံ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ငနဲတစ်ပွေပါပဲ။ သူက တစ်ယောက်ယောက်ကိုစောင့်နေ သလား ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာနေသလားတဲ့ ခပ်တိုးတိုး ညုလာတယ်။ ကျွန်တော်က ဘီယာတစ်ခွက် သောက်ရုံလာတာ ပါလို့ ဖြေလိုက်ရော။ နောက်တော့ သူက ‘ခင်ဗျားလို လူမျိုးတွေတွေ့ဖူးပါတယ်။ စကားမစပ် ဘယ်လိုလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားကိုတော့ မျက်စိကျကြမယ့်ပုံပဲ။ ခင်ဗျားက လန်းတယ်ဗျ’တဲ့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြုံးမိရပြီး ‘အာ မဟုတ်ရပေါင်ဗျာ…ခင်ဗျားတော့ ဂုန်းဆင်းပြီ’ လို့ပြောလိုက်မိပါရဲ့။ သားရေ၀တ်စုံနဲ့ငနဲက မလှမ်းမကမ်းက နံရံမှာမြင်ရသော မှန်ချပ်က ပုံရိပ်နှစ်ခုကို လက်ညိုးထိုးပြကာ ‘ဟိုမှာ အဖြူရောင် တီရှပ်နဲ့ငနဲရယ်၊ခင်ဗျားရယ် ကြည့်လိုက်ပါဦး’ သူက ကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြီးပြောတာလေ။ ‘ခင်ဗျားက တော်တော် စမတ်ကျတဲ့ ကိုယ်ဟန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဗျ’ လို့သူက ရွှင်ရွှင်မြူးမြူးပြောတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပျော်လာသလိုလိုဖြစ်ကရော။ ခင်ဗျားကိုပြောပါတယ် ကျွန်တော်က အစကတည်းက ကိုယ်လုံးလှပါတယ်ဆိုတာကို။ သူက ဟိုသည်ကြည့်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို စူးစမ်းသလိုရှု ကာ ‘ခင်ဗျား တင်ပါးတွေကလည်း အတော်လှတာပဲနော်၊ တစ်ခြမ်းလောက်များ ကျုပ်မှာရှိရင် အတော်ဟန်မှာဗျ’တဲ့။
ကျွန်တော် ပြုံးလိုက်မိရကာ ကိုယ့်ဖာသာစိတ်ထဲကပြောမိပါတယ် ‘ဟုတ်တယ်….အပျိုစင်တင်ပါးတွေကို ကိုင်ရသလိုကိုတင်းနေတာဗျ’ လို့။ နောက်တော့ သူနှင့်အတူ အပြင်တစ်နေရာရာကိုသွားရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အဲ ကျွန်တော်က အဲ့လိုအစီအစဉ်မရှိဘူး အခန်း အောင်းရတာပျင်းလို့အပြင်ထွက်လာတာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်။ ဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော်က straight တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့ နည်းနည်းတော့ စိတ်ထဲ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို ဖြစ်မိတာတော့ရှိတယ်ဆိုပါတော့။ သူက ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို ခဏစိုက်ကြည့်ဖတ်ရှု ပြီးနောက် ‘လာပါဗျာ….ကျုပ်အခန်းမှာ ခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားမယ့် Harley Division အမှတ်တရပစ္စည်းတွေအများကြီးစုထားတာတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒါလေးလည်း လိုက်ကြည့် ပြီးတော့ ဟိုမှာ ဘီယာဆက်သောက် အမြည်းအထူးအဆန်းလေးတွေစားပေါ့။ အပြာကားတွေစိတ်ဝင်စားရင် လည်းအစုံရှိတယ်။ စကားစမြည်ပြောပြီး ခင်ဗျားပြန်ချင်လည်းပြန်ပေါ့ဗျ’ တဲ့။ သူ့အပြောအရ သူနေတဲ့အခန်းက နှစ်ဘလောက်ပဲဝေးတာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ဟိုသည်လျှောက်ကြည့်တာပဲလေဆိုပြီး စိတ်လျှော့ကာ ထရပ်လိုက်ကာ ဘားတံခါးဝဆီအတူလှမ်းလိုက်ပါ တယ်။ သူ့စကားကမ်းလှမ်းမှုကြောင့် လိုက်လာမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ နည်းနည်းအံ့အားသင့်မိရတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သား ဘားကနေ ထွက်ခွာရင်း အတန်ကြာလျှောက်လာကာ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းတိုက်ခန်းတစ်ခုထဲဝင်ခဲ့ကြ ပြန်တော့ သတိထားမိရတာက အချို့နေရာတွေမှာ ဖုန်အနည်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ သူ့အိမ်က ပရိဘောဂတွေဟာ ရှေးဟောင်းနဲ့ ခေတ်သစ်စတိုင်လ် ရောမွှေထားတဲ့ ဒီဇိုင်းတွေဗျ။ အရှေ့တိုင်းဟန် အငွေ့အသက်တော့ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို ဆိုဖာတစ်လုံးပေါ် ထိုင်ဖို့ပြောပြီး ဘီယာ သို့မဟုတ် ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်သောက်မလားမေးရော။ ကျွန်တော်က ဘီယာတစ်ခွက်လောက်ပဲတောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ သူ မီးဖိုခန်းထဲဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ခဏအကြာမှာတော့ ဘီယာသံဗူးနှစ်ဗူးကို စုံကိုင်လာပြီး ပြန်ပေါ်လာတယ် လေ။ ဘီယာတစ်ငုံလောက်သောက်အပြီးမှာတော့ သူက ဘယ်လိုအပြာကားအမျိုးအစားတွေကိုကြည့်လေ့ရှိလဲတဲ့။ အပြာကားတွေကို အနုပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့ကော ခံစားတတ်လားမေးသေးတယ်။ သူက straight or gay အပြာကားကြိုက်တာရွေးလို့ဆိုလိုတာထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော် ဂေးအပြာကားတွေကို အရင်က တစ်ခါမှမကြည့်ဖူးဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ ခဏစောင့်ဆိုပြီး တိုက်အောက်ကို ခဏဆင်းသွား တယ်ဗျ။ ခဏနေတော့ ဒီဗီဒီအချပ်အချို့ပါလာပြီး ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲရှိတဲ့ Player ထဲထည့်ကာ စတင်ဖွင့်ပါတော့တယ်။
စက်ထဲထည့်ပြီး ဆိုဖာကိုသူပြန်လာတော့ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာရဲ့အခြားအစွန်းတစ်ဖက်မှာသူထိုင်ပြီး ရီမုဒ်က play ခလုပ်ကိုသူ နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ငနဲနှစ်ပွေ ပန်းခြံတစ်ခုထဲ အတူယှဉ်တွဲလမ်းလျှောက်လာတဲ့ မြင်ကွင်းကိုမြင်ရစဉ်ခဏ ဘီယာတစ်စုပ်တော့မျိုလိုက် တာပေါ့။ နောက်ပြကွက်တစ်ခုအပြောင်းအလဲကတော့ တိုက်ခန်းတစ်ခုထဲဝင်သွားကြကာ အ၀တ်အစားတွေကိုချွတ် အနမ်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲ ကြကာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ပွတ်သပ်နေကြပါရော။ ဒီအချိန် ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲပြောရရင် သူတို့လှုပ်ရှားမှုမှာ ရင်မခုန်မိသေးပေမဲ့ သူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ဗျ။ ငနဲနှစ်ပွေ တစ်ယောက်ငပဲတစ်ယောက် အပြန်အလှန် -ုပ်-ှုတ်နေကြတဲ့ပြကွက်ကိုအရောက်မှာတော့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ပေါင်ခြံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် မျက်စိကိုအသာထောင့် ကပ်လိုက်ကာ ဆိုဖာတစ်ဖက်စွန်းကဘဲကိုကြည့်လိုက်ရာမှာ သူက သူ့ပေါင်ကြားကငပဲကိုဘောင်းဘီပေါ်ကနေ အသာပွတ်သပ်နေတယ်။ သူ့ငပဲကမာတောင့်ပြီး တင်းနေတာကို ကျွန်တော်မြင်နိုင်သလို သူက ကျွန်တော့်ကို ဖျက်ကနဲစိုက်ကြည့်ကာ ပြုံးပြပါရော။
‘ဘယ်လိုလဲ ဒီလိုရုပ်ရှင်မျိုးကြည့်ရတာကော ဘယ်လိုခံစားရလဲ’ သူကမေးတယ်ဗျ။
‘အဲ….မဆိုးပါဘူးပြောရမယ်ဗျ၊ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားက အချက်ပြပါတယ်’
‘ဒါဆို ကြည့်ကြည့်ရအောင် ပြပါလား’
အစကတော့ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူးဗျ။ တစ်ဘက်ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ငပဲကိုထုတ်ပြပြီး -ုပြရ သို့မဟုတ် ကျွန်တော့် Levi’s ဘောင်းဘီထဲကဖောက်ထွက်တတ်မတော့ဖြစ်နေတာကို လေရှူခွင့်ပေးရမယ့်ဒီဇိုင်း။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘောင်းဘီကြယ်သီး တွေကိုဖြုတ်ကာ ညီဘွားကို အပြင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလူ တံတွေးတစ်ချက် မျိုချလိုက်ကာ ‘အိုး….တော်တော်ကြီးတဲ့ -ီးပိုင်ရှင်ပဲဗျ ခင်ဗျားက’တဲ့။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုလဲသူ အဲလို မျိုးပဲပြောမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ချက်တော့ ရယ်မောမိလိုက်ကာ ကောင်မလေးတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတိုင်းဘယ်လိုပြဿနာမှ မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူက ကျွန်တော့်အနား တိုးကပ်လာကာ ကျွန်တော့်ငပဲကိုစေ့ငုကြည့်ပြီးနောက် ‘ခင်ဗျားငပဲကို သေချာကြည့် ချင်တယ်ဗျာ အားရစရာကြီး’လို့တောင်းဆိုပါရဲ့။ ကျွန်တော်က အိုကေ၊ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ကျွန်တော်က straight တစ်ယောက် ဆိုတာ သတိထားဦးနော် ဘဲတွေနဲ့အတွေ့အကြုံလုံးဝရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူ့အပြောတော့ ပိုမိုပြီးတိုးကပ်ကြည့်ချင် တယ်ဆိုတာပဲ။ သူ့ခေါင်းကိုငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ ကျွန်တော့်မာတောင့်ပြီးမတ်နေတဲ့ငပဲနားကို တိုးကပ်ကြည့်တာများ သူ့အသက်ရှူငွေ့ နွေးနွေးကိုတောင်ခံစားမိရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကို တစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ကာ ‘ခင်ဗျား ငပဲထိပ်ဝလေးတွေက စိမ့်ထွက် နေတဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေကို အရသာစမ်းကြည့်မလို့ စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်’တဲ့ပြောပြန်ရော။
ကျွန်တော့် တုန့်ပြန်မှုက “ပြဿနာမရှိလောက်ပါဘူး အိုကေ’ပါတဲ့လေ။ သူ့ဦးခေါင်းကို ပိုမိုငုံ့ကိုင်းလိုက်ကာ သူ့လျှာဖျားကိုထုတ်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းကို တို့ထိလိုက်ပါတယ်။ ဆီးသွားပေါက်ဝ တစ်ဝိုက်ကိုသူ တို့ထိကလိတာပါ။ သူ့လျှာကိုပိုမိုထုတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့် ငပဲခေါင်းတစ်ဝိုက် ရစ်ပတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးသိမ့်ကနဲ လှုပ်ခါသွားစေတဲ့ ခံစားမှုမျိုးရမိလိုက်ပါတယ်။
အခုတော့ ငနဲက သူ့ငပဲသူကိုင်ကာ လက်ကစားနေသလို သူ့ဦးခေါင်းကလည်း အလိုက်သင့်လှုပ်ရှားကာ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းကိုသူ့ ပါးစပ်ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေပါရော။ ကျွန်တော် ရရှိနေတဲ့ ဖီလင်ကမိုက်ပေမယ့် သူ့ဦးခေါင်းကိုဖမ်းကိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲ ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း ‘အာ….မိုက်တော့မိုက်ပါတယ်ဗျာ…ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုလုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆိုတာ မသေချာဘူးထင်တယ် ဗျာ’လို့ ကတုန်ကယင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူက ‘ဘော်ဒါ….စိတ်ကိုလွှတ်ထားပြီး ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းခံစားလိုက်စမ်းပါ’လို့ဆို ပြန်တယ်။
ကျွန်တော် မတ်တပ်ရပ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပေမယ့် သူက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ထိုင်အောင် ဖိတွန်းလိုက်ပြီး သက်သောင့်သက်သာနေပါဟို ဆိုတယ်ဗျ။ ကျွန်တော် စိတ်ပြောင်းသွားပြီဗျာ ကျွန်တော်ထွက်သွားသင့်ပြီထင်တယ်လို့ သူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက ‘ခင်ဗျား ဒီလို မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်နေရာကို အသာတကြည်လိုက်လာပြီး ဘာကြောင့်ဒီလိုသွေးတိုးစမ်းခွင့်ပေးတာလဲ’လို့မေးရော။ ကျွန်တော် မသိဘူး ခင်ဗျားနဲ့မတွေ့ခင် ငနဲနှစ်ပွေနဲ့စကားပြောပြီး ခေါင်းရှုပ်နေချိန်မှာ ခင်ဗျားနဲ့တွေ့တာ ဘာတွေလုပ်နေမိမှန်းမသိဘူးဗျာလို့ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူက ခေါင်းရှုပ်နေရင်လည်းမစဉ်းစားနဲ့ပေါ့ကွာ…..အခု အလိုက်သင့်လေးနေလိုက်ပါ မင်းအန္တရာယ်ဖြစ်မယ့် ကိစ္စတွေ မဖြစ်စေရပါဘူးတဲ့။ လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးမှာ အားတုန့်အားနာဖြစ်စိတ် မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်ဘဲစမ်း မိတဲ့အပေါ် ရှက်စိတ်တွေကြောင့် သူ့ပြောစကားအပေါ် လိုက်လျောလိုက်ဖို့သဘောတူမိပါ၏။
သူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ မီးဖိုချောင်ထဲထပ်မံဝင်ရောက်သွားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ လက်ထဲမှာ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုင်လို့။ ‘ရော့…. တစ်ခါတည်းမော့ချလိုက်….အဲဒါ ဘရန်ဒီပါ။ ခင်ဗျား စိတ်တွေနည်းနည်းအေးဆေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်’ ကျွန်တော် သူပြောတဲ့အတိုင်း မော့ချလိုက်တာ လည်ချောင်းတလျောက် ပူရှိန်းတဲ့ ခံစားမှုကြီးက တော်တော့်ကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာပဲ ဘီယာဘူးကိုဆွဲယူလိုက်ကာ ခပ်များများစုပ်ယူသောက်လိုက်ပါရဲ့ ပူသွားတဲ့လည်ချောင်း နည်းနည်းသက်သာစေဖို့ပေါ့။ ဘရန်ဒီအပြင် ဘီယာပါသောက်လို့ နှစ်မျိုးပေါင်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာ ခံစားဖို့အချိန်ကိုမရလိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းနဲ့ တစ်ခုခုလွှမ်းလာသလိုပဲ။
တီဗီပေါ်ကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေရဲ့ ရောင်ပြန်ခတ်မှုတွေနဲ့အတူ ဆိုင်ကယ်သရဲဒီဇိုင်းငနဲက ကျွန်တော့်ကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ပျော့နေပြီး ပွင့်နေတဲ့ ဘောင်းဘီကြယ်သီးများကနေ အပြင်ကိုထွက်လို့ပါ။ သူ့လက်အစုံက ကျွန်တော့်ငပဲကို ပြန်ကိုင်လိုက်ပြီး ခပ်တင်းတင်းကစားပြန်တော့ ငေါက်ကနဲဆိုသလိုပြန်လည်မာတောင့်လာရော။ နောက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီခါးပတ်ကို ဆွဲဖြုတ်တယ်….ဘောင်းဘီကို အောက်ကိုဆွဲချပြီးချွတ်ဖို့စတင်ကြိုးစားတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို မပေးလိုက်တော့ သူအောက်ထိဆွဲချသွားကာ အကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အခုတော့ ဆိုဖာပေါ်ဝယ် ဖင်တုံးလုံးနဲ့ မတ်ထောင်နေသောငပဲကြီးဖြင့် ခပ်ယိုင်ယိုင်မှီထိုင်နေသော ကျွန်တော်။
အမည်မသိ ငနဲက ဆိုဖာပေါ်မှောက်ချလိုက်ရင်း သူ့ပါးစပ်ကိုအသားကုန်ဟရင်း ရှည်လျားလှတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲအစကနေငုံချလိုက်တာ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေထိတဲ့အထိပါပဲ။ အ…သူ..သူ ၇လက်မကျော်လောက်ရှည်တဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို အကုန်မြှုပ်ပစ်တာ။ ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲလျောတိုက်ဝင်သွားတဲ့ ဖီလင်ကတော့တော့ကို မိုက်ပါတယ်။ ငပဲခေါင်းထိပြန်ထုတ်လိုက် သူ့လည်မျိုထဲထိတိုင်သွင်းလိုက်လုပ်နေတာ ကျွန်တော်သိတယ် သိပ်ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အကုန်ပန်းထုတ်ပစ်မိတော့မယ်။ သူအဲ့တာ ကို ခံစားမိပုံပေါ်တယ်ဗျ သူ့ပါးစပ်ထဲကနေ အသာဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး အခုထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာထက်ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင် အိပ်ခန်းထဲက ခုတင်ပေါ်သွားကြရအောင်လို့ အကြံပေးတယ်။ ဟေ….ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မိနေလဲ? ငနဲတစ်ပွေကို -ီးပေးစုပ်ခိုင်းနေပြီး အခု ဒီထက်ပိုတဲ့ သာယာမှုတွေရဖို့လုပ်ဆောင်နေမိပြီ။ မတ်တပ်ရပ်ပြီးငြိမ်နေဖို့အချိန်မရ သူ့ဦးဆောင်ရာအိပ်ခန်းထဲ ကျွန်တော်လိုက် သွားမိပါရော။ ခုတင်ခြေရင်းအသာရပ်နေမိပြန်တော့ သူက အသာတွန်းလှဲလိုက်တာကြောင့် မွေ့ယာပေါ်နောက်ပြန်လဲကျရပါတယ်။
နောက်တော့ ကျွန်တော့် တီရှပ်ကိုပါ သူကဆွဲချွတ်ပေးပြန်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ်မရှိ ကိုယ်တုံးလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့။ သူလည်း သူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အ၀တ်တွေ ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေ ချွတ်ပစ်လိုက်စဉ် ကျွန်တော်ကြည့်မြင်ရသော သူ့ကိုယ်လုံးဟာ တော်တော်အချိုးကျ လှပတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့ကိုယ်လုံးမှာ အမွှေးအမျှင်သိပ်မရှိပေမယ့် ရင်ဘတ်အမွှေးနုလေးတွေက ဆီးစပ်ထိတန်းနေရော။ သူ အိပ်ရာပေါ် တွားတက်လာပြီး ကျွန်တော့်နံဘေးမှာ လဲလျောင်းလိုက်တယ်။ သူ့လက်နှစ်ဖက်ဟာ ကျွန်တော့်ဆံနွယ်တွေကိုပွတ်သပ်ပြီး နောက် သူ့မျက်နှာဆီဆွဲကပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငြင်ငြင်သာသာနမ်းရှိုက်လိုက်တာကို ခံစားရပါရော။ နောက်ပြန်ဆုတ် ချိန်မရတော့တဲ့ ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းလွှာတွေကြား သူ့လျှာတစ်ချောင်းလုံးတိုးဝင်မွှေနှောက်လာသလို နုညံ့တဲ့သူ့ နှုတ်ခမ်းသားတွေရဲ့ နမ်းစုပ်မှုတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို အသက်ရှူဖို့လေ အငမ်းမရ လိုအပ်စေပါတယ်။
ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ခေါင်းပြန်မတ်သထက်မတ်လာတာကို ခံစားသိမိရသလို ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေဟာလည်း မြန်လာတာကို ရိပ်စား မိရပါတယ်။ သူ့လက်အစုံဟာ အငြိမ်မနေတော့ဘဲ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို စတင်စမ်းသပ်စူးစမ်းပါရဲ့။ ကျွန်တော့ နို့သီးခေါင်းလေး တွေနား အသာအယာပွတ်သပ်ပြီးနောက် အဲဒါလေးတွေကို အသာအယာဖျစ်ညှစ်ပြန်တယ်။ ဘယ်လိုတွေလည်းမသိ…သူလုပ်တာ ကျွန်တော့်ငပဲကို ပိုမိုတောင့်တင်းသွားစေသလိုပဲ။ ကျွန်တော် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်တုန်းက ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖီလင်တွေမျိုး မဟုတ်တာတော့သေချာပါတယ်။ ဒီလူပေးနေတဲ့ သာယာမှုတွေက တကယ့်အရိုင်းအဆန်ဆုံးအိပ်မက်တွေထဲက ခံစားမှုမျိုးတွေဖြစ်နေ ပါရော။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးဝယ် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် မျောနေသလိုခံစားရပါတယ်။သူလဲလျောင်းနေတုန်း ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ် မှန်းမသိ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ဟာ မတ်နေသော သူ့ငပဲကိုအသာဆွဲကိုင်ကြည့်မိသဗျ။ အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာသူ့ကို ပိုမိုထကြွသွားစေ တယ်နဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တစ်ဝိုက်ကိုအနမ်းတွေပေးတယ် ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနွေးနွေးလေးနဲ့ ရစ်ဝိုက် ကစားရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော့်ချက်ပေါက်လေးရှိရာဆီရွေ့သွားပါတယ်။ ချက်ကလေးကို တစ်ချက် တစ်ချက်စုပ်နမ်းလိုက်ပြီး နောက် လျှာဖျားလေးကို အပေါက်လေးထဲ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်တာ ကြက်သီးများတောင်ထမိရောလေ။ နောက်တော့ သူ့လျာဖျားလေးဟာ ငပဲအရင်းနားဆွဲချသွားကာ ဘယ်ဘက်ရွှေဥဘက်ကို ရစ်ဝိုက်ကစားရင် နှုတ်ခမ်းများဖြင့် ရုတ်တရက်စုပ်နမ်းလိုက် တယ်။ အာ….ပါးစပ်ထဲမှာငုံထားရင်း လျှာနွေးနွေးကြီးနဲ့ ရစ်ဝိုက်ကစားပြန်တာ ရင်ထဲကလိ ကလိဖြစ်ရသလို အခြားတစ်ဖက်ကိုရွှေ့ပြီး လုပ်ပြန်တော့လည်း ထို့အတူခံစားရပါပြီ။
ကျွန်တော် အသာဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူ့ငပဲကို ဟိုသည်ကစားကာ ထိပ်ပိုင်းလေးကို စတင်စမ်းသပ်မိတော့ အရည်ကြည်လေးအချို့စို့ နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သူ့တင်ပါးတွေကို အသာစတင်လှုပ်ရှားလာပြီးနောက် ကျွန်တော့်လက်တွေထဲကို သူ့ငပဲအားအထုတ်အသွင်း လုပ်ပါရဲ့။ သူ ကျွန်တော့်ခြေချောင်းလေးတွေရှိရာကို အနမ်းပို့လွှတ်တဲ့အနေအထားရောက်သွားတော့ သူ့ငပဲခတ်မတ်မတ်ဟာ ကျွန်တော့် နှာခေါင်းနားမှာ တရမ်းရမ်းလေ။ အရည်ကြည်လေးတွေရွှဲနေတာကိုမြင်ရသလို ယောက်ျားနံ့လို့ခေါ်နိုင်တဲ့ သူ့ကိုယ်ပိုင်အနံ့ ကိုလည်း ရှူရှိုက်မိပါတယ်။ သူ့ငပဲကို အစအဆုံး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုင်ကစားနေပြန်တော့ တစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော့်နှာတံတွေနဲ့ တို့တို့မိ ရော။
သူ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို ပြန်ပြီးစုပ်မျိုတာကို ခံစားရသလို တစ်ချက် တစ်ချက် ရွှေဥတွေရဲ့အောက်ခြေက အပေါက်လေးဘက်ကို လျှာက ရောက်ရောက်သွားတာကြောင့် ကလိထိုးသလို ဖြစ်ဖြစ်သွားရပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းကနေ အရေကြည်တွေ စို့ပြီးနေရ သလို သူ့တံတွေးများကြောင့်လည်း ရွှဲနေပါပြီ။ သူ အဲ့ဒီအရည်အရောကို လက်နဲ့အသာသပ်ပြီးယူလိုက်ကာ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ အတူ ကျွန်တော် တင်သားနှစ်ခုကြားက အပေါက်လေးထဲ တကယ့်ငြင်ငြင်သာသာလေးထိုးသွင်းပါတယ်။ အာ…ပါးစပ်ဟပြီးအသက်ရှူဖို့ ပြောလို့ သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာ သူ့လက်ချောင်းတွေ အတွင်းထဲဖြည်းဖြည်းရောက်သွားပြီးနောက် ကျွန်တော့် prostate ကို ထိခတ်ကစားကြတော့ တစ်ကိုယ်လုံးပင်တုန်လှုပ်မိပါရဲ့။ နောက်တော့ သူ့ပါးစပ်ကိုအသာဟကာ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို သွင်းတာ သူ့လည်မျို ထဲရောက်တဲ့အထိပါပဲ။
အခုတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ် မသိသေးတဲ့ အာရုံခံစားမှုတွေကိုပိုပိုပြီးလုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်နေမိပြီ။ ကျွန်တော့်ကိုဘာတွေ ဖုံးလွှမ်းလာပြီမသိ သူ့ငပဲကို သေချာစူးစိုက်ကြည့်မိရသလို ပါးစပ်ကိုဟကာ သူ့ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို သူလုပ်သလို အကုန်သွင်းကြည့် လိုက်ပါတယ်။ သည်းသလိုဖြစ်သွားမိရပြီး ပြန်လည်ဆွဲထုတ်မိပါရဲ့။ နောက်တော့ အသာလေးပဲ သူလုပ်သလိုမျိုးအသာအယာ အထုတ် အသွင်းပဲလုပ်နေလိုက်မိပါတယ်။ တစ်ခါ တစ်ခါ သူဖိသွင်းမှုကြောင့် လည်မျိုထဲရောက်သွားကာ သူ့ဆီးခံမွေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်နှာခေါင်း ထိခတ်မိတဲ့အထိဖြစ်လေရော။
သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲကတစ်ဆင့် လည်မျိုထဲထိတိုင် သူ အထုတ်အသွင်းစလုပ်နေသလို သူ့ပါးစပ်က အော်ညည်းသံတွေဟာလည်း အဆုတ်ထဲကလာနေတဲ့ လေတွေနဲ့အတူ ဟူးကနဲပါပဲ။ သူ့အတံကြီး ပါးစပ်ထဲ လျောကနဲ လျောကနဲဝင်လာတာမှာ ကျွန်တော့်ကို အသက်ရှူမှားစေသလို ကျွန်တော့် ပရော့စတိတ်ကိုကလိကာ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲ အဆုံးထိသွင်းသွင်းကစားနေပြန်တော့ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားတာရော နှိုးဆွမှု ကျွမ်းကျင်တာတွေရောကြောင့် ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သူ့ပါးစပ်ထဲကို သုက်ရည်တွေ အဆုံးမဲ့ပန်းထည့်လိုက်မိပါတော့တယ်။ အတန်ကြာ ငြိမ်သက်နေမိပြီးမှာ လိင်တူ အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာမှုရှာတာ ရတာဟာ ဒီလိုပါလားဆိုတာ သတိကပ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော့် ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲက အသာဆွဲထုတ် ငြိမ်ငြိမ်လေးလဲလျောင်းနေကာ အသက်ကို၀၀ရှူနေမိချိန်မှာတော့ သူဇောက်ထိုးအနေအထားက နေပြန်ပြီးတည့်မတ်ကာ ကျွန်တော့်နံဘေးဝယ်လှဲလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ရစ်သိုင်းဖက်တွယ်လိုက်ကာ ပါးကို တစ်ချက်အနမ်းပေးရင်း ‘ဘယ်လိုလဲ ခင်ဗျားရဲ့ ပထမဆုံး man to man အတွေ့အကြုံလေးက’လို့မေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ကာ ‘အာ…ဒီလိုဖီလင်မျိုးခံစားရလိမ့်မယ်လို့သိခဲ့ရင် ဟိုးအရင်ကတည်းက လုပ်ခဲ့မိတာကြာပေါ့ဗျာ’လို့ ဖြေလိုက်မိပေါ့နော်။ သူက ‘ဒါက အခြားလိင်တူယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အတွေ့အကြုံ သာယာမှုရဲ့ အစပျိုးတစ်ခုပဲရှိခဲ့ သေးတာနော်’ လို့ဆိုပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သား ၁၅မိနစ်လောက် လှဲနေကြပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားမိပါတယ်။ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီမသိ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဆုပ်ကိုင်တဲ့ ခံစားချက်ကြောင့်ပြန်ပြီး နိုးထလာရရော။ ကျွန်တော့်ငပဲမှာ အစာစားရမှာကြောင့် လန်းဆန်းပြီး ထကြွလာ တာ သူမဟုတ်တော့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ မျက်လုံးများကို မှေးထားရာမှ ဖွင့်လိုက်တော့ ခုတင်ဘေးက စားပွဲပုပေါ်ဝယ် ချောဆီပုလင်းနဲ့အတူ ကွန်ဒုံးတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ သူ ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို အသာယူလိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲဝယ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်စွပ်ပေးပါရဲ့ ။ နောက်တော့ ချောဆီပုလင်းကို ကျွန်တော့်အား လက်ကမ်းတာကြောင့် ကျွန်တော် နည်းနည်းယူလိုက်ကာ သူ့တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားက ခရေ၀တစ်ဝိုက်ရွှဲစိုပေးလိုက်မိသလို ကျွန်တော့်ငပဲမှာလည်းသုတ်လိမ်းလိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဘက်ကို ကျောပေးလဲလျောင်းကာ တင်ပါးတွေကို အသာဖြဲပေးရင်း ‘အသာ ခပ်ဖြေးဖြေးလေးလုပ်နော်’တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း မရဲတရဲ အသာအယာ တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြား ငပဲခေါင်းမြုပ်အောင် ဖိသွင်းလိုက်ပါတယ်။ သူက သူ့တင်သားတွေနဲ့ အသာအယာဖိညှပ်ရင်း အထုတ်အသွင်းခဏလုပ်ကြည့်ကာ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားအောင် နောက်ပြန်ဖိသွင်းပါရဲ့။ ကျွန်တော့်ငပဲတစ်ချောင်းလုံး သူ့တင်သားဆိုင်တွေကြားထဲကို တဆုံး ဒုတ်ဒုတ်ထိ ၀င်သွားချိန်မှာတော့ သူ့ပါးစပ်က ညည်းညူသံတွေထွက်လာသလို သိုင်းဖက်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လက်အစုံကိုလည်း သူ ခပ်တင်းတင်းပြန်ကိုင်ပါတယ်။ ခပ်ကြပ်ကြပ် ခရေ၀ထဲ ငပဲတစ်ချောင်းလုံး အထုတ်အသွင်းလုပ်ရတဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိ ပါဘူးဗျာ တကယ်မိုက်တယ်။
ဖီလင်က ရွှေဥတွေထဲ ၀ဲလယ်လှည့်နေသလို ကြက်သီးမွှေးညှင်းများထတဲ့အထိ သူ့အပြုအစုက မျိုးစုံပါတယ်။ သူ လေးဘက်ထောက်ပေး တဲ့အနေအထားမှာတော့တုန်ခါနေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်များကိုကြည့်ကာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပြန်တော့ဘူး အရမ်းခပ်ကြမ်း ကြမ်းကို ဆောင်းသွင်းမိပါရော။ ‘Yeah….ဆောင့်ဗျာ….ခင်ဗျား စိတ်ကြိုက် ဆောင့် ဆောင့် အား’ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုမှ ထိန်းမထား တော့ဘူး စက်သေနတ်ပစ် သလိုလုပ်လိုက်တယ်။ အား……အ နောက်ဆုံးတစ်ချက် အဆုံးဆောင့်သွင်းပြီးချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် သုက်ရည်တွေကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ပန်းပစ်လိုက်တာပေါ့။ ကွန်ဒုံးစွပ်ထားတာကြောင့် ကိုယ့်သုက်ရည်ရဲ့ပူနွေးမှုကို ပြန်ခံစားရတဲ့ ဖီလင်က ဒီတစ်ခါတော့ တော်တော့ကိုကောင်းတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲကို အတန်ကြာ ကျင်းစိမ်ထားတာမှာ ပျော့သွားတဲ့အချိန်မှ သူက အသာအယာ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဘက်ကို ပြန်လှည့်လာပြီးနောက် ကျွန်တော့်ပါးပြင်အနှံ့ နောက်တစ်ကြိမ် အနမ်းဝေပေးပြီး နှစ်ယောက်သား ခုတင်ပေါ်လှဲနေလိုက်ကြပါသတဲ့။
နောက်တစ်ကြိမ် သတိပြုမိချိန်ကတော့ နောက်တစ်နေ့မနက်ရဲ့ နံနက်ခင်းနေရောင်ခြည်ရယ် ပြီးတော့ လတ်ဆတ်တဲ့ ကော်ဖီရနံ့တွေ ရယ်ပါပဲ။ သူ ပြတင်းပေါက်ကို ခေါင်းတစ်ချက်ပြူကြည့်နေပြီးမှ ‘Good Morning, ကော်ဖီကိုဘယ်လိုသောက်မလဲ ဘော်ဒါ’လို့မေးတယ်။ ဘာမှမရောရသေးတဲ့ အကြမ်းထည်အတိုင်းပဲ တစ်ခွက်လောက်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်။ သူက တစ်ချက်ရယ်မောလိုက်ကာ အခု ၇ နာရီထိုးနေပြီတဲ့ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးအနားယူချင်သေးတယ်ဆိုရင် သူ့အခန်းမှာနေခဲ့နိုင်တယ် ၈ နာရီခွဲလောက်ကျရင်တော့ သူသွားစရာရှိ တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရတယ် ပြန်တော့မှာပါ တည်းနေတဲ့ မိုတယ်ကိုပြန်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်မိရဲ့။ အိပ်ရာပေါ်ကထ အ၀တ်အစားတွေအကုန်ပြန်ဝတ်ဆင်ပြီးနောက် သူတည်ခင်းတဲ့ ကော်ဖီကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ကိုသောက်လိုက်ပါတယ်။ သူက ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကဘယ်လိုနေလဲတဲ့မေးပြန်တော့ ကျွန်တော်က အာ…ဒီလိုလုပ်တာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ပဲလို့ မညာချင်ပါဘူးဗျာလို့ဖြေလိုက်ပါရော။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ် သူနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဆုံတွေ့ကြဖို့ ဆန္ဒဖြစ်မိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် အခွင့်အလမ်းနည်းလောက်ပါတယ် လေ။ ဒီတော့ကာ….ကျွန်တော် အခြားသော ခပ်ဟော့ဟော့ ငနဲတစ်ပွေနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်ရှာဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီ…အဟုတ်။
Alex Aung (19 Jan 2015)
Posted by Alex Aung at 2:49 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 7:30 PM 1 comment: